Madaxweynaha Zimbabwe oo ku dul kufay rooga cas ee garoonka Harare (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Zimbabwe oo ku dul kufay rooga cas ee garoonka Harare (Sawirro)
A warsame 5 February 2015 5 February 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Zimbabwe ee wayeelka ah, Robert Mugabe ayaa kufay xilli uu ka degay garoonka diyaaradah caasimadda dalkiisa ee Harare.
Robert Mugabe ayaa ka laabtay dalka Itoobiya, isagoo halkaas dabayaqaadii Janaayo 2015 uga qeybgalay shir madaxdedka dalalka Midowga Afrika.
Madaxweyne Mugabe ayaa isagoo ku dul socda rooga cas ee madaxda loo fidiyo ayaa mar qura kufay, waxaana durba la booday oo dhulka ka qaaday rag farabadan oo isugu jiray ilaalo, baratakool iyo mas’uuliyiin.
Mugabe, oo jira waxaa dhawaan loo doortay gudoomiyaha wareegga ah ee Midowga Afrika, waxaana la dilayaa inuu 21-ka bishaan February u dabaaldego sanadguuradiisa 91-aad.
Robert Mugabe waa siyaasi muddo hayay xilka madaxweynaha dalka Zimbabwe, wuxuuna si adag uga soo horjeeda madaxda dalalka galbeedka.
Siyaasiyiin badan oo isaga kasoo horjeeda ayaa qaba inuusan dalka hogaamin karin maadaama uu waayeel noqday, islamarkaana uusan caafimaadkiisu wanaagsaneyn.
Sidoo kale, markii uu qabanayey xilka Gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa waxaa su’aalo badan laga keenay sida uu howshaas u qaban karo.
Danjire Kay oo ka walaacsan in muranka ka jira Soomaaliya uu dib u dhigo Higsiga 2016
Itoobiya oo ciidamo geyneysa magaalada Kismaayo